Civic စျေး - အွန်လိုင်း CVC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Civic (CVC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Civic (CVC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Civic ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $21 869 129.00
volume_24h_usd: $9 550 460.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Civic တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Civic များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CivicCVC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0348CivicCVC သို့ ယူရိုEUR€0.0293CivicCVC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0265CivicCVC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0316CivicCVC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.309CivicCVC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.219CivicCVC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.766CivicCVC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.129CivicCVC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.046CivicCVC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0485CivicCVC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.776CivicCVC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.269CivicCVC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.189CivicCVC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.6CivicCVC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.5.85CivicCVC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0476CivicCVC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0529CivicCVC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.08CivicCVC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.241CivicCVC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.71CivicCVC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩41.16CivicCVC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦13.37CivicCVC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.55CivicCVC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.957
CivicCVC သို့ BitcoinBTC0.000003 CivicCVC သို့ EthereumETH0.00009 CivicCVC သို့ LitecoinLTC0.000639 CivicCVC သို့ DigitalCashDASH0.000383 CivicCVC သို့ MoneroXMR0.00039 CivicCVC သို့ NxtNXT2.71 CivicCVC သို့ Ethereum ClassicETC0.00512 CivicCVC သို့ DogecoinDOGE10.03 CivicCVC သို့ ZCashZEC0.000422 CivicCVC သို့ BitsharesBTS1.07 CivicCVC သို့ DigiByteDGB1.11 CivicCVC သို့ RippleXRP0.123 CivicCVC သို့ BitcoinDarkBTCD0.0012 CivicCVC သို့ PeerCoinPPC0.115 CivicCVC သို့ CraigsCoinCRAIG15.84 CivicCVC သို့ BitstakeXBS1.48 CivicCVC သို့ PayCoinXPY0.607 CivicCVC သို့ ProsperCoinPRC4.36 CivicCVC သို့ YbCoinYBC0.00002 CivicCVC သို့ DarkKushDANK11.16 CivicCVC သို့ GiveCoinGIVE75.3 CivicCVC သို့ KoboCoinKOBO7.92 CivicCVC သို့ DarkTokenDT0.032 CivicCVC သို့ CETUS CoinCETI100.41